Wasiirka Amniga oo booqdey degmada Balcad | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Wasiirka Amniga oo booqdey degmada Balcad
Wasiirka Amniga oo booqdey degmada Balcad
Wasiirka Amniga Gudaha Dowlada Federalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ay wehlinayeen xildhibaano ka tirsan Baarlamanka Federalka iyo siyaasiyiin ayaa maanta socdaalka dhulka ah ku tegey degmada Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Wafdiga Wasiirka Amniga ayaa waxaa soo dhoweeyay mas’uuliyiinta maamulka degmada Balcad oo uu horkacayo guddomiyaha mamulka degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ( Qaasim Furdug)waxana ay la kulmeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo ka dhagasytay maamulka iyo shacabka baahiyaha amni ee ka jira degmada Balcad.
Wafdiga Wasiirka Amniga oo ay ka mid ahaayeen Xildhibaan Cabduqadir Carabow Ibrahim iyo Xildhibaan Aadan Cali Xasan kana mid ah xildhibaanada laga soo doortay Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in degmada Balcad ay u yimaadeen sidii ay ugu kuurgali lahaayeen xaalada amni iyo mida baahi ee shacabka degmada balcad ay qabaan.
“Waxaan indhaheena ku soo aragnay burburka xoogga leh ee haysta wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo degmada Balcad iyo dhibaatada shacabka ku haysata waxaana aan rajeyneynaa in dhowaan dayactir lagu sameeyo.”ayuu yiri Xildhibaan Carabow.
Wasiirka Amniga Dowlada Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka hadlay arrimaha ammaanka ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin weerarada Al-shabaab ee ku soo laalaabtay wadada isku xirta degmada Balcad iyo magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabelle,
Wasiir Ducaale ayaa sidoo kale xusay inuu socdo qorshe amniga lagu soo celinayo islamarkaana kaalinta ciidanka Militariga dowlada Soomaaliya ay noqon doonto mid meesha looga saaro weerar ka yimaada Al-shabaab.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo boggaadiyey doorka culimada ee dib u heshiisiinta Galmudug
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kormeerey xarunta ciidanka qeybta 21 aad ee dhuusamareeb